Master Chef မှ ဒေါ်ဖြူဖြူ တင် နန်းခင်ဇေယျာ ရဲ့ မာလာရှမ်းေ ကာ ကို အားရပါး ရ ဝေဖန် – Zartiman
နန်းခင်ဇေယျာ ရဲ့ မာလာရှမ်းကော ကိုတော့ Master Chef ဒိုင်လူကြီး တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ဖြူဖြူတင် သမီးဖြစ်သူတွေက ကြိုက်ကြပြီး Packaging နဲ့ ပြင်ဆင်ပုံ မှာယူရန် ဝန်ဆောင်မှုတွေကောင်းမွန်တယ်လို့ ချီးကျူးသွားခဲ့ပါတယ်။နန်းခင်ဇေယျာကလည်း သူမအနေနဲ့ ဒေါ် ဖြူဖြူတင်နဲ့ ခင်မင်နေတာ ကြာပြီဖြစ်ပေမယ့် လက်ဆောင်ပို့ပေးရာမှာ Feedback ကောင်းရဖို့ မမျှော်လင့်ရဲတဲ့အကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါ သေးတယ်။
ဒေါ်ဖြူဖြူတင်က ဆိုင်ဖွင့်ဖို့အစီအစဉ်ရှိနေတဲ့ နန်းခင်ဇေယျာအတွက် အကြံဉာဏ်ကောင်း တစ်ချို့ပေးလာခဲ့ပြီး New Covid စတိုင်အနေနဲ့ Online Delivery စတိုင်အနေနဲ့ ဇောက်ချလုပ်ကိုင်သင့်တယ်လို့အကြံပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရော ဒေါ်ဖြူဖြူတင်ရဲ့ ဝေဖန် ချက်တွေကို သဘောတူကြရဲ့လား။?? ကိုယ့်ရဲ့ ထင်မြင်ချက်လေးတွေကို Comment မှာရေး ထားခဲ့ကြပါအုန်းနော်။ဒီလို Judge လုပ်ခိုင်းခဲ့ ရာမှာတော့ Master Chef ဒိုင်လူကြီး ဒေါ်ဖြူဖြူတင်က နန်းခင်ရဲ့ မာလာရှမ်းကောကို အားရပါးရဝေဖန်လာခဲ့တာပါ။
နန်းခင်ရဲ့ မာလာရှမ်းကောကို အရမ်းအစပ်လွန်ကဲတယ်လို့ခံစားရတဲ့အတွက် ကျန်းမာရေး အရ မကြိုက်ဘူးလို့ ဖွင့်ဟလာခဲ့တာဖြစ် ပါ တယ်။သူမအနေနဲ့ အစပ်လွန်ကဲတာတွေ စားလေ့ရှိသူတွေကိုပါ ဘာအရသာရလို့စားတာလဲလို့ မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပြီး ကျန်းမာရေး အရ အရ သာတစ်ခုကို လွန်လွန်ကဲကဲ ထည့်ထားတဲ့ အစားအစာတွေကို မစားသင့်ကြောင့်လည်း ပြောကြားခဲ့တာပါ။
Master Chef ပြိုင်ပွဲ ကေ တာ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေ ကို ဝေဖန်ရာမှာ အထူး နာမည်ကြီး တဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခု ဖြစ်သလို ဒိုင်လူကြီးများ ဟာလည်းစည်း စနစ်ကြီးလှပြီး အသေးစိတ်ကြည့်ရှူစစ်ဆေးရာမှာ ထူးချွန်ကြသူတွေဆိုတာ ပရိသတ်ကြီးလည်းသိရှိပြီးဖြစ်မှာပါ။ နန်းခင်ဇေယျာ ကတော့ ကိုဗစ် ၁၉ ကာလမှာ မာလာရှမ်းကော ရောင်းချနေတာဖြစ်ပြီး Master Chef ဒိုင်လူကြီး ဒေါ်ဖြူဖြူတင် ကို အင်တာဗျုးအစီအစဉ်တစ်ခုမှာ တွေ့ဆုံရာမှာသူမရဲ့ မာလာရှမ်းကော ကို Judge လုပ်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
နနျးခငျဇယြော ရဲ့ မာလာရှမျးကော ကိုတော့ Master Chef ဒိုငျလူကွီး တဈဦးဖွဈတဲ့ ဒျေါဖွူဖွူတငျ သမီးဖွဈသူတှကေ ကွိုကျကွပွီး Packaging နဲ့ ပွငျဆငျပုံ မှာယူရနျ ဝနျဆောငျမှုတှကေောငျးမှနျတယျလို့ ခြီးကြူးသှားခဲ့ပါတယျ။နနျးခငျဇယြောကလညျး သူမအနနေဲ့ ဒျေါ ဖွူဖွူတငျနဲ့ ခငျမငျနတော ကွာပွီဖွဈပမေယျ့ လကျဆောငျပို့ပေးရာမှာ Feedback ကောငျးရဖို့ မမြှျောလငျ့ရဲတဲ့အကွောငျး ပွောကွားခဲ့ပါ သေးတယျ။
ဒျေါဖွူဖွူတငျက ဆိုငျဖှငျ့ဖို့အစီအစဉျရှိနတေဲ့ နနျးခငျဇယြောအတှကျ အကွံဉာဏျကောငျး တဈခြို့ပေးလာခဲ့ပွီး New Covid စတိုငျအနနေဲ့ Online Delivery စတိုငျအနနေဲ့ ဇောကျခလြုပျကိုငျသငျ့တယျလို့အကွံပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ ပရိသတျကွီးရော ဒျေါဖွူဖွူတငျရဲ့ ဝဖေနျ ခကျြတှကေို သဘောတူကွရဲ့လား။?? ကိုယျ့ရဲ့ ထငျမွငျခကျြလေးတှကေို Comment မှာရေး ထားခဲ့ကွပါအုနျးနျော။ဒီလို Judge လုပျခိုငျးခဲ့ ရာမှာတော့ Master Chef ဒိုငျလူကွီး ဒျေါဖွူဖွူတငျက နနျးခငျရဲ့ မာလာရှမျးကောကို အားရပါးရဝဖေနျလာခဲ့တာပါ။
နနျးခငျရဲ့ မာလာရှမျးကောကို အရမျးအစပျလှနျကဲတယျလို့ခံစားရတဲ့အတှကျ ကနျြးမာရေး အရ မကွိုကျဘူးလို့ ဖှငျ့ဟလာခဲ့တာဖွဈ ပါ တယျ။သူမအနနေဲ့ အစပျလှနျကဲတာတှေ စားလရှေိ့သူတှကေိုပါ ဘာအရသာရလို့စားတာလဲလို့ မေးခှနျးထုတျခဲ့ပွီး ကနျြးမာရေး အရ အရ သာတဈခုကို လှနျလှနျကဲကဲ ထညျ့ထားတဲ့ အစားအစာတှကေို မစားသငျ့ကွောငျ့လညျး ပွောကွားခဲ့တာပါ။
Master Chef ပွိုငျပှဲ ကေ တာ့ ပွိုငျပှဲဝငျတှေ ကို ဝဖေနျရာမှာ အထူး နာမညျကွီး တဲ့ပွိုငျပှဲတဈခု ဖွဈသလို ဒိုငျလူကွီးမြား ဟာလညျးစညျး စနဈကွီးလှပွီး အသေးစိတျကွညျ့ရှူစဈဆေးရာမှာ ထူးခြှနျကွသူတှဆေိုတာ ပရိသတျကွီးလညျးသိရှိပွီးဖွဈမှာပါ။ နနျးခငျဇယြော ကတော့ ကိုဗဈ ၁၉ ကာလမှာ မာလာရှမျးကော ရောငျးခနြတောဖွဈပွီး Master Chef ဒိုငျလူကွီး ဒျေါဖွူဖွူတငျ ကို အငျတာဗြုးအစီအစဉျတဈခုမှာ တှဆေုံ့ရာမှာသူမရဲ့ မာလာရှမျးကော ကို Judge လုပျခိုငျးခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။